Akụkọ - Nleta Ndị Ahịa
Taa, ndi otu anyi jiri obi uto nabata Jan, onye isi ulo oru ndi otu ndi otu ndi Belgium na ndi otu ya tinyere ndi injinia ahia, ndi isi ahia na ndi injinia ihe oru. Na ọkachamara na nlezianya chọrọ, ha enyocha anyị CNC omumuihe, EDM noo, Slow waya ọnwụ shop, egweri shop, Quality ụlọ na Assembly ogbako. Nleta a anyị nwetara nnukwu otito na nnabata dị elu site n'aka ha. Ọzọkwa Jan na ndị otu ya nyere ndụmọdụ bara uru maka ụlọ ahịa ngwa ọrụ anyị.
Ná nzukọ ahụ, Jan na ndị injinia nhazi anyị kwurịtara banyere ngwaahịa ha. Isi ahia ha bu akuku plastik na ngwa ulo na ulo oru ogwu, ma nwee oke ochicho maka ichoghari, tinye ihe na ntaneti 2K, nke ahu bu ihe anyi choro. Anyị gosipụtara ụdị ngwa ngwa plastik anyị yiri ya wee soro ha kwurịtara banyere nsogbu ndị ọrụ aka na nhazi nke ụdị ebu ndị a, yana nkọwa ndị a ga-akwụ ụgwọ. Ndị ọrụ injinia anyị maara ihe na ahụmịhe bara ụba masịrị ha ma mata ha, ugbu a anyị nwere nghọta ka mma banyere mkpa ndị ahịa na ihe achọrọ maka ịkpụzi plastik na nrụpụta akụkụ.
Obi abụọ adịghị ya na ahụmịhe anyị dị ukwuu na ngwaọrụ Ahụike na ngwa ụlọ eji arụ ọrụ na imepụta plastik mere ka ntụkwasị obi anyị nwekwuo nkwado. N'ikpeazụ, ha jụrụ anyị ma anyị nwere ụlọ ahịa na-enweghị ntụ ma na ha chọrọ ka ngwaahịa ha pụta na ụlọ ọrụ anyị. Anyị emeworị atụmatụ ịhazi ụlọ ọrụ na-enweghị ntụ na 2021.
YF ebu bụ onye ndu na n'ichepụta nkenke ọgwụ ebu, na ihe karịrị afọ 10 na-enye ebu ọgwụ ebu na ịkpụzi ọgwụ maka ahịa nke esenidụt, anyị na-enye ihe ngwọta a pụrụ ịdabere na ya na nke okike, nka anyị gụnyere Multi Cavity Mold, Nkenke Ebu, 2 Shot Mold, Fanye Nkedo na ahụmahụ na-eme plastic ebu maka Automotive, Medical, Home ngwa oru na Industrial ụlọ ọrụ.
Kpọtụrụ anyị ka ị mụtakwuo banyere ụgwọ ọrụ ị ga-akwụ ụgwọ ugbu a.
Ndị na-emepụta ebu ebu, Plastic Fanye Nkedo, Ndị na-akpụzi ihe ntanye, Omenala akpụzi, Ọgwụ Nkedo na Metal Inserts, Akpụzi Factory,